Fiainana klioba :: Horaisin’i Rôrô an-tanana ny AS Adema • AoRaha
Fiainana klioba Horaisin’i Rôrô an-tanana ny AS Adema
Hanohy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja baolina kitra diviziona elita miaraka amin’ny AS Adema i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô. “Maromaro ny antony nifidianana an’i Rôrô ho eo amin’ny toeran’ny mpanazatra ny klioba”, hoy ny mpitantana eo anivon’ity klioban’ny seranam-piaramanidina ity. Isan’ireny ny tsy maintsy hananan’ireo mpanazatra mitantana ny klioba elita ny “licence A”, manomboka amin’ny taona ho avy. Isan’ireo mahafeno io fepetra io i Romuald Rakotondrabe. Teo ihany koa ny fihitsohana kely nanjo ny ekipan’ny AS Adema, tamin’ny lalao mandroson’ny “Orange Pro League”.
Izy no hisolo an’i Johny Rakotomanana, izay nitondra ny klioban’ny AS Adema, nandritra ny fihodinana voalohany ho an’ny fifaninanam-pirenena elita. Fandresena dimy sy ady sahala telo ary faharesena telo no azon’ny AS Adema, tamin’ireo lalao 11 vita ka nahazoan’izy ireo isa 18. Laharana fahadimy no misy azy ireo, taorian’ny andro faha-11. Baolina 12 no matin’ireo mpilalao, raha valo kosa no niditra tao amin’ny haraton’ny AS Adema.
Nandritra ny antsasaky ny fifaninanana dia ny klioban’ny AS Jet Mada no noentin’i Rôrô, mpilalaon’ny FC BFV fahiny. Efa nitantana ihany koa ny ekipan’ny kaominina Antananarivo renivohitra (Uscafoot) izy, tamin’ny taona 2018 – 2019. Manana sekolin’ny baolina kitra, AS Rôrô, ity mpanazatra vaovaon’ny AS Adema ity. “Tsotra ny nifanarahana. Hamerina indray ny lazan’ny AS Adema ka hikatsaka ireo vokatra sahaza azy amin’ity taom-pilalaovana ity”, hoy hatrany ny mpitantana eo anivon’ny klioba AS Adema.
Baolina lavalava Hohavaozina ny kianja Makis Andohantapenaka
Lomano – Faritra fahaefatra Havanana amin’ny rano mitsilany ny Malagasy
Haiady Judo – La Réunion Nandrombaka medaly iraika ambin’ny folo ireo Malagasy
Kitra – « Tema Coupe de Madagascar » Nomontsanin’ny Disciples FC 11 noho 1 ny Zandry Gasy FC
Haiady « pancrace » – Ranomasimbe indiana :: Hikatsaka haka medaly volamena maromaro ny delegasiona malagasy
Baolina kitra – « CAN 2021 » :: Maniry ny hilalaovan’ny Barea any Toamasina i Nicolas Dupuis